काठमाडौ । केही दिन अगाडि भारतीय पत्रिकामा उडिसाका एक गरिब आदिवासी दाना माझीको एक यस्तो तस्वीर छापिएको छ , जसले मन मस्तिष्कमा सबै मानिसलाई नराम्रो असर गरेको छ । दाना माझी आफ्नो काँधमा श्रीमतीको लाश लिएर लगभग १२ किलोमिटर पैदल हिडे ।
माझीकी पत्नीको टिबी रोगबाट मृत्यु भएको थियो । माझीसँग मृत श्रीमतीको शव घर लैजानका लागि आवश्यक रकम थिएन । लाश वाहनले धेरै नै रकम मागिदिए ।
माझिले मृत श्रीमतीको लाश घर लैजान अस्पतालसँग सहयोग मागिएको भएपनि अस्पतालले इन्कार गरेको बताए । उनीसँग कुनै विकल्प थिएन जसका कारण उनले लामो यात्रा काधँमा श्रीमतीको लाश लिएर पुरा गरे । भारतीय सञ्चारमाध्यहरुमा दाना माझीले एक कपडामा बेरीएको लाश आफ्नो काँधमा बोकेर हिडेको दृश्य देखाइएको थियो । जुन पीडादायक थियो ।
तर यहाँ गरिब र असक्तका लागि कोही सहयोगी छैनन् भन्ने यो घटनाले देखाएको छ । कलियुग चरम अवस्थामा छ । जुन बेला कसैलेपनि कसैको दुख देख्दैन भन्ने कुरा यो घटनाबाट पुष्टि हुन्छ ? यसले मानवतामाथी नै प्रश्न उब्जाएको छ ।
दिदि–बहिनी र बाबु मिलेर प्रेमीलाई सि’ध्याएपछि बाबु छोरीले बिहे गरे !
जब बिरालोले च्यापेर यस्तो अदुभूत सर्प घरभित्र ल्यायो
बाख्रीकोमा सुपरग्लुले राज्खानि टाँसेर खसीको मासु भन्दै बिक्रि !
डार्विनको खुलासा सत्य : मानव शरीरमा सबै चकित हुने परिवर्तन आउने बैज्ञानिकले पत्ता लगाए !
कोरोना कारण देखाउँदै घरबेटीले एक युवतीमाथि जे गरे त्यसले बनायो सबैलाई हैरान !
आफ्नै साथिलाई कामबाट निकाल्न यी महिलाले गरिन् यस्तो हर्कत, थाहाँ पाउँदा दुनियाँ हैरान